Soomaalida Ku Nool Mareykanka oo Olole ugu Jira Wax Ka Bedelka Sharciga Socdaalka Dalkaasi – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaSoomaalida Ku Nool Mareykanka oo Olole ugu Jira Wax Ka Bedelka Sharciga Socdaalka Dalkaasi
Soomaalida Ku Nool Mareykanka oo Olole ugu Jira Wax Ka Bedelka Sharciga Socdaalka Dalkaasi
Hiiraan Xog, Mar 25, 2018:- Dadka soo galootiga ah oo ay Soomaalida ku jirto kuwaasi oo kunool Dalka Mareykanka ayaa wada olole iyo dadaalo ku aadan sidii wax badan looga bedeli lahaa sharciga soo galootiga Dalkaasi,kaasi oo saameyn ballaaran uu ku yeeshey bulshooyin badan oo Soomaalidu ay kamid tahay.
Wakiilo ka kala socda bulshada Soomaalida ee dagan gobalka Minnesota iyo gobolada kale ee Mareykanka iyo Qareenno ka socda hay’adaha xuuqul insaanka ayaa maalmahan ku sugaanaa magaalada Washington ee dalka Mareykanka si ay ula kulmaan sharci dejiyaasha waddankaasi Marakanka.
Dadkani ayaa dadaal ugu jira in hidise-sharciyeedka laanta socdaalka ee dalkaasi Mareykanka oo hadda horyaalla xildhibaanada Kongareeska in ay kala hadlaan sidii wax looga badali lahaa,islamarkaana loogu soo dari lahaa qodobbo dhaxal gal u ah bulshada Soomaalida.
Maxamuud Xasan oo u ololeeya arrimaha Soomaalida Maraykanka ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeeddada qorshohooda,isagoo la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee BBC.DA.
“Runtii saad ogtahay hay’adda Socdaalka waxaa soo socda in la bedelo sharciga Socdaalka, ee dadka soo galootiga ah,waxaan u tagnay Congreska iyo Senatorska oo laga soo doorto Gobolka Soomaalidu ay degto,dhamaan dadka soo galootiga ah ee Mareykanka waxay isugu yimaadeen Washington,sidookale waxaa nala socda hay’adaha xuquuqul insaanka oo doonaya isbedel lagu sameeyo sharciga”. Ayuu yiri Maxamuud Xasan.
Maxamuud Xasan ayaa intaasi ku daray in ay doonayaan in dib loo furo xafiiskii qaabilsanaa arrimaha Visaha Dal ku galka ee Yugandha,kaasi oo dhawaan ay xirtay dowladda Mareykanka.
“Waxaa sidoo kale aan kala hadalnay dad badan oo Soomaali ah oo degan Yugandha oo qaraabadooda ugu diraan halkaasi Visaha,dhawaan ayaa la xiray xafiiskaasi, marka waxaan rabnaa in xafiiskaasi dib loo furo,ahmiyad weyn ayayna inoo leedahay arrintaasi iyo in Soomaalida laga saaro liiska dadka dib loo celinayo”. Ayuu yiri Maxamuud Xasan.
Dowladda Mareykanka ayaa dhawaanahanba waxaa ay adkeysay arrimaha socdaalka dalkaasi,taasi oo saameyn ballaaran ay ku yeelatay bulshooyin badan oo u socdaalayay dalkaasi.